विद्यालय प्रयोगशाला होइनन् !
बालबालिकाको राष्ट्रिय नीति निर्माणमा नागरिक सुझाव संकलन
माटोको डिजिटल नक्सा तयार पार्ने नेपाल एसियामै पहिलो
अन्जु र थीर बाँधिए विवाह बन्धनमा
‘नेता खरिद-बिक्रीको मार्केट गुल्जार नहोस्’
कायर हो र राजीनामा दिने ?
संसद पुन:स्थापना भएर केही बिग्रिएको छैन : शंकर पोखरेल
कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ को औपचारिक घोषणा, फागुन २१ बाट प्रशारण हुने
प्रधानमन्त्रीले कुन नाकले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने ?
भोट नदिनेहरुलाई नै अहिले सबैभन्दा धेरै कांग्रेस चाहिया’ छ : देउवा
संविधान निगरानी समूहले भन्यो–सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक कोसेढुंगा
विद्यालय प्रयोगशाला होइनन् ! डा. साधना प्रतीक्षा
बाह्रखरी - बुधबार, माघ ७, २०७७
विद्यालय खुल्ने सूचना पाएर विद्यार्थीहरू फुरुङ्ग भएका छन् । भौतिकरूपमा कक्षा कोठामा उपस्थित भएर, साथीहरूसँगै बसेर अनि शिक्षकहरूसँग प्रत्यक्ष कक्षा लिन पाउने आशामा उमङ्गित उनीहरू वर्ष दिनअघि थन्क्याएका आफ्ना विद्यालय पोसाक झिकेर नापिरहेका छन् । बिर्सिसकेका जुत्ता खोजेर खुट्टा घुसार्दै ठिक्क हुन्छन् कि साँघुरा भए भनेर जाँच्नमा व्यस्त देखिएका छन् । कतिपयलाई आफ्ना पोसाक र जुत्ता साना भएकाले नयाँ तयार गर्ने चटारो छ । विद्यालय जान आवश्यक पर्ने सबै सामग्री खोज्ने, जतनसाथ राख्ने गर्दै उनीहरू अबको विद्यालय खुल्ने दिन पर्खेर बसेका छन् ।
बालबालिको विद्यालय, लगभग एक वर्षदेखि भेट नभएका साथी अनि उनीहरूसँगको रमाइलो हाँसखेल सम्झेर कतिबेला विद्यालय पुगँु भन्दै हतारिइरहेका होलान् । यसैगरी अभिभावक पनि चिसो कोठामा दिनभर बसेर मोबाइल र ल्यापटपमा घोत्लिइरहेका छोराछोरीले त्यसबाट छुटकारा पाएर घाम ताप्दै खुला परिवेशमा किताब पढ्न पाउने भए भन्दै मख्ख भइरहेका छन् । दुवैथरीको उत्सुकता र उमङ्ग अस्वाभाविक छैन । किनभने कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक गरिविधि अन्योलग्रस्त थियो । केही बालबालिकाले अनलाइन कक्षाको अवसर प्राप्त गरे पनि कतिपय भने त्यसबाट वञ्चित थिए । त्यसैले विद्यालय खुल्ने निर्णयलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिइएको हुनुपर्छ ।
यो सकारात्मक सङ्केतभित्रका गहन चुनौतीलाई सायद हामीले बिर्सेका छौँ । विद्यालय अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । यहाँ सामान्य लापरबाही भयो भने असङ्ख्य बालबालिकामा नकरात्मक असर पर्छ । विद्यालयले भौतिकरूपमा कक्षा सञ्चालनका लागि सूचना सम्प्रेषित गर्दा मख्ख परेका हामी अभिभावक आफ्ना नानीहरूका विद्यालय पुगेर त्यहाँ कक्षा सञ्चालनका लागि केकस्तो सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ त्यसको अनुगमन गरेका छौँ कि छैनौँ ? अहिले पहिलाकै अवस्थामा कक्षा सञ्चालन गरिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । विद्यालय प्रशासनले दाबा गरेजस्तो भौतिक दूरी कायम गर्नु त्यति सजिलो पक्कै छैन । सिट क्षमताभन्दा निकै बढी सङ्ख्यामा विद्यार्थी चढाएर लैजाने स्कुल बसहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ ? पहिलो जिज्ञासा यहीँबाट आरम्भ हुनुपर्छ ।
विद्यालय परिसरमा प्रवेश गर्नासाथ विद्यार्थीहरूबीच भौतिक दूरी कायम गर्न विद्यालयले केकति जनशक्तिको व्यवस्था गरेको छ ? साबिकको जनशक्ति हालको अवस्थामा पर्याप्त हुन सक्दैन । कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूबीच भौतिक दूरी कसरी कायम गरिँदैछ ? केहीबाहेक अधिकांश निजी विद्यालयहरूले ससाना कोठामा टनाटन विद्यार्थी राखेर पढाउने गरेकोमा अतिरिक्त कक्षाकोठा र सोहीअनुसार शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्नु पनि तिनका लागि त्यति सहज देखिँदैन । यसैगरी शौचालय तथा धारा, पानीको व्यवस्था कसरी गरिएको छ ? विद्यार्थीहरूबीच भौतिक दूरी बनाउन सर्वाधिक कठिनाइ शौचालय तथा धारा पानीको प्रयोगमा नै देखिनेछ । किनभने छोटो समयको विश्राममा उनीहरूले यसको प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सदाझैँ ठेलमठेल गर्दै जाने उनीहरूलाई नियन्त्रण कसले गर्ने ? त्यसपछिको समस्या चमेनागृह र खेलमैदानमा देखिनेछ । अधिकांश विद्यालयहरूमा खुला चौर तथा व्यवस्थित चमेनागृह छैन । विद्यार्थीहरूले खाजा कहाँ र कसरी खान्छन् सोको निरीक्षणका लागि पनि अतिरिक्त जनशक्तिकै आवश्यकता पर्नेछ ।
यतिमात्र कहाँ हो र ? लगभग वर्षदिनपछि भेटिएका साथीहरूलाई तीन मिटरको दूरीबाट हेरेर बालबालिकाले चित्त बुझाउलान् ? या उनीहरू मौका पाउनासाथ हातेमालो गर्दै भ्mयाम्मिन पुग्लान् ? त्यसको अनुगमन पनि कसले गर्ने ? घरमा अभिभावकलाई आफ्ना एकदुई नानीहरू तह लगाउन त सजिलो हुँदैन भने विद्यालयमा धेरै बालबालिकालाई नियन्त्रणमा राख्नु सामान्य चुनौतीको विषय होइन । भौतिक दूरी कायम गरेर बालबालिकालाई पढाउनु पनि सोचेजस्तो सहज देखिँदैन । किनभने, टाढाबाट शिक्षकले बोलेको भरमा मात्र उनीहरूको पठनपाठन प्रभावकारी बन्न पनि सक्दैन ! यी र यस्ता धेरै कठिनाइको आकलनविना विद्यालय सञ्चालन गरिनु जोखिममुक्त देखिँदैन । भर्चुअल प्रविधिबाट कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको ठाउँमा शैक्षिक सत्र खेर गएको छ । यसप्रकारले जोखिमका साथ कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा भौतिकरूपमा कक्षा सञ्चालनको हतार नगरेको भए हुनेथियो । सबै अभिभावकका लागि आफ्ना बालबालिकाको पहिलो प्राथमिकता उनीहरूको स्वास्थ्य हो । किनभने, उनीहरू स्वस्थ रहे भने शिक्षा त ढिलोचाँडो हासिल गर्न सकिहाल्छन् ।
यतिबेला विद्यालय खोल्ने निर्णयलाई एउटा प्रयोगका रूपमा लिइँदैछ । विद्यालय खोल्ने र कुनै कठिनाइ आएमा वा बालबालिका संक्रमित भएमा पुनः बन्द गर्ने ! तर, मननीय के छ भने – विद्यालय प्रयोगशाला होइनन् । एउटा विद्यालयमा असङ्ख्य बालबालिका हुने हुँदा एकदुई जना संक्रमित भए पनि विद्यालयलाई खासै असर नपर्ला । तर, अभिभावकका लागि त तिनै एकदुई बालबालिका नै सम्पूर्ण हुन् ! उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो भने त्यसको जिम्मेवारी वा उपचारको व्यवस्था कसले गर्ने ? के यससम्बन्धमा विद्यालय प्रशासन र अभिभावकहरूबीच समझदारी भएको छ ? आज एउटा प्रयोग गर्ने नतिजा सोचेजस्तो नआए भोलि अर्को प्रयोग गर्दै जाने प्रयोगशालाका रूपमा विद्यालयलाई हेरिनुले महामारीको जोखिम नियन्त्रित भइनसकेको अवस्थामा थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।
हालको विषम परिस्थितिमा विद्यालयलाई प्रयोगशालाका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णयका पछाडि केही कारणहरू छन् । पहिलो कारण सरकारले निजी विद्यालयबाट गर्ने कर असुली रोकिएकाले सोही प्रयोजनका लागि विद्यालय खोल्ने अनुमति दिएको देखिन्छ । यसैगरी विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र आरम्भदेखि शुल्क उठाउन नसकेको हुँदा वर्षभरिको शुल्क उठाउने उद्देश्यले हतारमा विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन् । अनलाइन कक्षाद्वारा सम्पूर्ण शुल्क असुली गर्न नसकिएको हुनाले विद्यालय व्यवस्थापनले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन तथा परीक्षाका बहानामा साबिकजस्तै सम्पूर्ण शीर्षकमा शुल्क उठाउने उद्देश्य राखेका छन् । यसरी आफ्नो आर्थिक उद्देश्य पूरा भएपछि परिस्थितिमा जटिलता आएको खण्डमा पुनः बन्द गर्ने संभावना त छँदैछ !
विद्यालय व्यवस्थापन र सरकारको आर्थिक स्वार्थका कारण त्यहाँ कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाले समेत विभिन्न कठिनाइ सहनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, हालको अवस्थामा अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षक आर्थिक समस्यामा देखिएका छन् भने कतिपय त बेरोजगारजस्तै भएका पनि छन् । यसरी हेर्दा विद्यालय खोल्दा र नखोल्दा दुवैतिर समस्या देखिए पनि हतारमा गरिएको विद्यालय खोल्ने निर्णय नै बढी जोखिमपूर्ण देखिन्छ ।
महामारी नियन्त्रणको अनिश्चितताका कारण ढिलोचाँडो शैक्षिक क्षेत्र सुचारु त गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि विश्वविद्यालय, कलेज तथा एघार–बाह्र कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै गएर फागुनको अन्तिम साताबाट माथिल्ला कक्षाहरूबाट विद्यालय सञ्चालन गरिँदै जानु प्रभावकारी हुनेथियो । अहिलेको चिसो, दिन तथा साँझ–बिहान देखिएको असन्तुलित तापक्रम स्वास्थ्यका दृष्टिले प्रतिकूल मानिन्छ । बालबालिका विद्यालयबाट फर्केपछि नुहाउनेधुने कार्य पनि हाल सहज देखिँदैन । संक्रमणबाट जोगिनका लागि गर्नुपर्ने सरसफाइ प्रभावकारी बनाउन पनि कठिन देखिन्छ । यसप्रकारका जटिलताहरूप्रति आँखा चिम्लेर सरकारले कर उठाउन, विद्यालयले शुल्क उठाउन तथा केही अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण तत्कालै विद्यालय खोल्न गरिएको निर्णय व्यावहारिक देखिँदैन । आवश्यक सम्पूर्ण तयारीबिना विद्यालय सञ्चालन गरिनु बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमाथि प्रयोग गर्नका लागि विद्यालयलाई प्रयोगशाला बनाइनु हो । त्यसैले सबै जिम्मेवार पक्षबाट मनन गरिनुपर्छ –विद्यालय प्रयोगशाला होइनन् !
बुधबार, माघ ७, २०७७ मा प्रकाशित
निसानामा नेपाली कांग्रेस
समयमा दलकाे अधिवेशन नगर्दा लोकतन्त्रको पहरेदार ठानिएको देशकै पुरानो र ठूलाे पार्टी नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता नै सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको... २२ घण्टा पहिले
अबको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिनुको कुनै विकल्प देखिँदैन । नैतिकताको कुनै मानकलाई मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले पनि आफैँले पदबाट... मंगलबार, फागुन ११, २०७७
छ त कसैसँग ‘प्लान बी’ ?
अराजक हुलमा मुलुकका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि थपिएका छन् । तर, ओलीकाे बाेली भने बेग्लै छ । प्रतिनिधि सभा... मंगलबार, फागुन ११, २०७७
‘राई’ जाति हैन उपाधि
मंसिर २२, २०७७ को मितिमा बाह्रखरी अनलाइनमा राजुकुमार राईको ‘राई शब्द बारे भ्रम र यथार्थ’ शीर्षकको लेख पढ्न पाइयो ।... सोमबार, फागुन १०, २०७७
नेपाली क्रान्ति : फसाना इस कदर रंगीन था . . .
नेपाली जनताको बलिदानबाट स्थापित प्रजातन्त्रमाथि २०१७ मा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरे । अनि ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा राजाले शासन... आईतबार, फागुन ९, २०७७
कांग्रेसलाई एक अर्को अवसर
नेपाली कांग्रेसको सुझबुझपूर्णले देशलाई राजनीतिक गतिरोधबाट मुक्त गरेको साक्षी इतिहास छ । अहिले मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटतर्फ... शुक्रबार, फागुन ७, २०७७
अब कांग्रेसको अग्निपरीक्षा
अधिनायकवादीको लामो भाषण
सोमबार, फागुन १०, २०७७
अधिनायकवादीको लामो भाषण सोमबार, फागुन १०, २०७७
प्रधानमन्त्रीद्वारा उपराष्ट्रपतिको अपमान (भिडियोसहित) सोमबार, फागुन १०, २०७७
सडक तमासामा किन प्रतिस्पर्धा ? बुधबार, फागुन ५, २०७७
प्रतिगमनको पराजय प्रतीक प्रधान
छ त कसैसँग ‘प्लान बी’ ? गोविन्द अधिकारी
अनैतिकलाई नैतिकताको मतलब हुँदो रहेनछ
८ घण्टा पहिले
‘ढिलोचाँडो नयाँ जनादेशबाट हामी सत्तामा जाने बाटो खोज्नुपर्छ’ (भिडियोसहित) आईतबार, फागुन ९, २०७७
नेकपा एउटै हो भनेर आयोग पन्छिन मिल्दैन, तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ शुक्रबार, फागुन ७, २०७७
अहिलेकै अवस्था रहे दुई/चार वर्षमा सुगम संगीत रहँदैन मंगलबार, फागुन ४, २०७७
एक मिनेट आकाशमा... वर्षा महर्जन
‘महामहिम’ प्रतिभा राणालाई पत्र !
अष्ट्रेलियामा मनाइयो टोपी दिवस
सोमबार, पुस २०, २०७७
साइप्रसमा रहेका नेपालीहरुमा कोरोना संक्रमण बढ्यो, दूतावासद्वारा सतर्क रहन आग्रह शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७
साउदी अरेबियामा बहिर्गमनको अधिकारलाई वृद्धि गर्न श्रम सुधारको योजना सुरु बुधबार, कात्तिक १९, २०७७
नेपाल र ओमान सरकारबीच ९० दिनसम्म प्रवेशाज्ञा छुटसम्बन्धी सम्झौता सोमबार, कात्तिक ३, २०७७
‘मार्नकै लागि कुरेर बसेको थिएँ, भागरथी दिदी चाउचाउ खाँदै आइन्’
सस्तो बन्दै ब्याजदर, सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा
फुटपाथ व्यापार : काठमाडौं महानगरले उठाउँछ, ललितपुरले व्यवस्थापन गर्छ
इजलासमा हाँसोको फोहोरा छुटाउने महान्यायाधिवक्ता खरेलको त्यो जवाफ...
Enter Yout Text
विश्व मृत्यु : २४६५५२७
संक्रमित : १११३३२७११
नेपालमा मृत्यु : २६८४
संक्रमित : २७३७६०